Vitamins sanadka oo dhan: sida loo xafido isteroberi jiilaalka Maqsin?
Dayrta waa waqtiga beergooyska. Dhammaan dadka reer miyiga ah waxay xiiseynayaan sidii loo badbaadin lahaa natiijooyinka gawaarida iyo xilliga xagaaga sida ugu macquulsan. Waxaa si gaar ah u adag in la ilaaliyo cayayaanka iyo casiir leh, laakiin miro aad u xun sida miskaha. Inkasta oo isteroberi lagu kaydiyo wax ka sii badan tufaaxa, laakiin, si kastaba ha ahaatee, waa suurtogal in la ilaaliyo iyaga oo isticmaala jiilaalka.
Khudradda la qalajiyey - tan iyo carruurnimada, nala yaqaan annaga oo dhan, macmacaanka faa'iido leh. Miraha la qalajiyey sidoo kale waa caawimo weyn oo loogu talagalay diyaarinta guriga ee jiilaalka. Waxay hayaan dhamaan sifooyinka wanaagsan ee miraha cusub, nafaqooyinka iyo antioxidants. Waad ku mahadsantahay iyaga, waxay sameeyaan quruxbadan macaaneed, firfircoon oo udgoon iyo karbaash.
Waxaan isticmaalnaa qalabka casriga ah: waxaan qallajinaynaa isteroberi qalabka korantada iyo aerogrill
Thanks to qalabka korontada khaaska ah, sida mikrovelastada, qalajiyaha korontada ama foornada qashinka, fawaakihda la qalajiyey iyo khudradda xilliga qaboobaha ayaa si fudud u fududaanaya. Qalabka guryaha oo si isku mid ah loogu isticmaali karo qalajinta ama qalajinta isbeddelka, gaar ahaan haddii dalagga uu noqdo mid aad u ballaaran, oo aadan rabin inaad lumiso miro dheeraad ah oo aan ku habbooneyn kaydinta Maqaar cusub.
Nadiifinta guriga gudihiisa: sida loo qalajiyo si habboon?
Xayeysiin kasta waa ogyahay in kaydka jiilaalka uusan wax badan dhacayn. Habka ugu muhimsan ee lagu ilaaliyo cuntada xilliga jiilaalka waa in la qalajiyo miraha, gaar ahaan tufaaxa iyo isteroberi, taas oo aad ka diyaari karto cuntooyin dhadhan fiican leh oo caafimaad leh oo loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta inta lagu jiro xilli qaboobaha. Tani waa mid aad u qadiim ah oo waqti-la tijaabiyey, habka lagu kalsoon yahay ee caanaha, taas oo u oggolaanaysa midhaha inay ku hayaan dhammaan guryaha ugu fiican, iyadoo la kordhinayo waxyaabaha kalooriga ah.
Kiimiko - miro aan fududayn in lagu kaydiyo waqti dheer Maqsinka iyo gaar ahaan guriga. Sidaa darteed, waxaa fiican in la isticmaalo pear cusub. Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtogal ah in ay u hoggaansamaan ilaalinta iyaga oo ka dhigaya meelo kala duwan oo jiilaal ah, si kastaba ha ahaatee, inta lagu guda jiro habka pear waxaa la kulmay heerkul sarreeya (ka sarreeya 90 darajo), taas oo keeneysa in lumiyo dhammaan waxyaabaheeda faa'iido leh.
Farsamada si ay u caawiso: sida loo qalajiyo isteroberi cusub microwave?
Dalagyada la qalajiyey ee jiilaalka ee guriga waa habka ugu haboon ee milkiilayaasha guryaha oo aan haysanin meel bannaan, mana jirto bannaan bilaash ah balakoonka ujeedooyinkaas. Kuwa aan haysan awoodda ama rabitaanka inay ku engegaan isteroberi foornada ama caawinta qalabka jikada, su'aasha ayaa soo baxaysa haddii ay si dhakhso ah u wanaagsanaan karto, laakiin foornada microwave.
Sida loo kaydiyo zucchini guri dabaq ah xilliga jiilaalka iyada oo gacan ka heleysa qaboojiyaha si sax ah?
Dhammaadka xagaaga iyo bilowga xilliga dayrta, wakhtiga jiilaalka ayaa bilaabmaa. Dad badan waxay isku dayaan inay diyaariyaan iyo zucchini, sababtoo ah waxay yihiin ilaha qiimaha fiitamiinada iyo macdanta. Maxaad u baahan tahay inaad samayso haddii dalka ku hagaagay goosashada qani ku ah khashinka? Ha ku siin khudradda asxaabta ama qaraabada, sababta oo ah zucchini waa cunto iyo faa'iido leh.
Ku ilaalinta zucchini ee maqaasiinka uma baahna dadaal badan.
Maaha wax ku filan oo kaliya inaad koraan dalagga - waxaad kaloo u baahan tahay inaad badbaadiso. Si ay u qurxiyaan kuwa ay u jeceshahay soodhaha kala duwan ee jucchini jiilaalka oo dhan, waa in ay guri-guri fiican u ogaadaan qaar ka mid ah faahfaahinta kaydinta. Waa in la ogaadaa in zucchini uu leeyahay fiitamiino badan oo waxtar leh iyo walaxyo aad u muhiim u ah jirka bini'aadamka.
Tiknoolaji heer sare ah oo loogu talagalay kaabajka: xaaladaha, heerkulka iyo wakhtiga
Laga soo bilaabo tan iyo kaabashka Ruushka lagu qiimeeyey sida ugu badan oo rooti ah. Waxaa la cunay sanadka oo dhan. Kaabashka waa antioxidant wanaagsan, caanka ugu caansan - carotene, sababta oo ah, dad badan ayaa ugu yeeraya wax soo saarka dhalinyarada. Kaabashka Caddaanku waa khudrado dhaqameed ee beeraha khudradda ee dalka. Waxaa jira noocyo badan, laakiin kaydinta waa in la doorto si sax ah.
Sida loo kaydiyo kaabajka broccoli xilliga qaboobaha guriga: qaboojiyaha ama qaboojiyaha?
In kasta oo xaqiiqda ah in kaabash broccoli uu ku filan yahay heerkul hooseeya, abaar iyo maaha sida adag u koraan sida, tusaale ahaan, tayo fiican, waa kaydinta taasoo keeneysa dhibaatooyinka ugu badan. Wuxuu si deg deg ah u dhacaa mana jecla qoyaan xad dhaaf ah oo badan. Broccoli waxaa loola jeedaa alaabooyin leh nolol shaf ah oo gaaban.
Cuntooyinka ugu caansan ee zucchini qalajiyey jiilaalka ee guriga, in qalabka korantada iyo foornada
Zucchini waa khudradda waxtar leh, mid ka mid ah sifooyinka soo jiidashada kaas oo ah wax yar kalooriga. Nooc khudaar ah oo hodan ku ah fiitamiinada iyo macdanta, nasiib daro, ayaa lagu kaydiyaa muddo aan ka badneyn 10 maalmood, laakiin tani waa uun cusub. Sannadihii ugu danbeeyay, gurigeyga ayaa sii kordhaya zucchini ee xilliga jiilaalka, marinating, caanaha, ama iyaga oo ka shaqeynaya macaanka ama macaanka.
Boorashka Brussels waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada ugu faa'iidada badan ee kaabajka. Waa kaydka guud ee maaddooyinka waxtarka leh, sida fosfooraska, birta, potassium, fitamiinada iyo macdanta. Isticmaalka kaabajka cuntada ayaa saameyn ku leh hawlaha dhammaan nidaamyada jirka, gaar ahaan nidaamka wadnaha.
Xulashada kala duwan, nadiifinta iyo kaydinta kaabajka kohlrabi ee jiilaalka guriga iyo maqaasiinka
Kaabashka Kohlrabi - warshad biennial, mid ka mid ah noocyada of kaabajka cad caadiga ah, iska leh caanaanka qoyska Cabbage kaabash. Nooca noocan ah ee kaabajka ah waa badeecad aad u qiimo badan oo loo isticmaalo dadka. Waxay ka kooban tahay borotiinka qudaarta ah iyo carbohydrateska, dufanka qaab kasta oo gebi ahaanba maqan.
Ma joojin karaa zucchini xilliga qaboobaha guriga: cuntada ugu fiican ee cagaarka iyo ukunta
Si loo qaboojiyo jucchini jiilaalka waa mid aad u fudud. Laba saacadood, xayawaanka, xitaa iyadoon caawimaad ka helin qof ka tirsan qoyska, si sahal ah ayay ula qabsanayaan dhammaan hababka loogu diyaar garoobayo jucchini xilliga qaboobaha. Waxa ugu muhiimsan waa in ay haystaan ​​khudaar tayo wanaagsan leh iyo qaboojiyaha qaboojiyaha. Maqaalkani wuxuu sharxayaa qaybaha shaqada, habka qaboojinta jucchini ee jiilaalka guriga iyo ficilada kale iyo damqashada aad u baahan tahay inaad wajahdo.
Guest ka soo Shiinaha: sida loo ilaaliyo kaabajka Beijing for jiilaalka at home?
Kaabashka cusub Cusub waxaa lagu kaydiyaa wax ka yar kaabajka cad. Laakiin marka aad dooranaysid noocyada ugu habboon, oo ku xiran xeerarka kaydinta, kaabajka cusub ayaa la cuni karaa ilaa sanadka cusub. Si aad khudraddaas u sii dheeraato, halsano, qalajinta iyo qaboojinta ayaa caawin doonta. Waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan sida loo keydiyo noocyada kale ee kaabajka, sida Savoy, Brot Brab, kohlrabi, broccoli ama aan tayo lahayn, boggayaga internetka.
Kaabashka Savoy: kaydinta jiilaalka ee geerashka, dhulka hoostiisa ama maqaasiinka
Kaabashka Homeland Savoy - Talyaaniga. Warshadkan, oo inta badan si qalad ah loogu yeero qudaar iyo dalag, xididada asal ahaan duurjoogta ah ayaa laga heley oo keliya gobolka Talyaaniga ee Savoie. Noocaan Kaabashan si dhakhso ah ayuu ugu guuleystey Yurub sababtoo ah dhadhankiisa, laakiin reer Ruushka waxay bilaabeen inay kobciyaan noocyada kala duwan oo kaliya ku dhowaad qarnigii XIX.
Cunto fudud oo la qalajiyey oo la qalajiyey xilliga qaboobaha ee Kuuriya iyada oo la adeegsanayo foornada iyo korontada
Dhibaatada ah ee goosashada weyn ee zucchini waa in aan la kaydin cayriin in ka badan 10 maalmood. Oo waxay noqon doontaa mid aad u fiican in la helo fursad ay ku cunaan jucchini sanadka oo dhan, iyo ma aha oo kaliya xilli ciyaareedkooda. Oo hadday beergooyska u soo baxdo inay run tahay mid aan caqli gal ahayn, markaa intiisa badani waa la engegi karaa: kalsooni, dhadhan fiican iyo caafimaad leh.
Waxay ka baqaysaa dhaxan ugu horeysay: wakhtiga iyo wakhtiga kaabajka goosashada beerta ilaa kaydinta
Haddii kaabajka cad ee aan la soo ururin wakhtigii loogu talagalay, markaa nolol shelf ayaa si xun u xanuunsan. Waxaa muhiim ah in la qabsado waqtigan marka madaxyada musqulaha horey loo sameeyay, laakiin weli ma aysan awoodin inay qaboojiyaan. Waqtiga goosashada ee kaabajka waxay ku xiran tahay inta badan noocyada gaarka ah iyo gobolka koritaanka. Talooyin fudud oo tixgelinaya dhammaan faahfaahinta ururinta, waxay gacan ka geysan doontaa inaysan qaldanayn oo diyaariyaan kaabajka loogu talagalay kaydinta dheer.
Sidee loo badbaadiyaa kaabajka jiilaalka ee guriga dhexdiisa, adoo isticmaalaya balakoonka ama qaboojiyaha?
Miyuu suurtogal ah in lagu keydiyo kaabiga dhismaha magaalada xilliga jiilaalka? Sidee loo abuuraa khudaarta qaab fiican, ma dhicin, laakiin ma aysan qasab ahayn inay tagaan fogaan? Wax walba waa sahlan tahay, ku kaydi cabbitaanka balakoonka ama qaboojiyaha, ama xitaa kaliya jikada, laakiin tixgelin dhammaan faahfaahinta kaydintaas.
Sida loo qalajiyo "broccoli", kaneem, kaabajka iyo tayo lahayn jiilaalka, adigoo isticmaalaya foorno ama qalajiye koronto?
Kaabashka waxaa si fiican loogu kaydiyaa foomka la qalajiyey, waxay haysaa dhammaan walxaha waxtar leh waxayna kuu ogolaaneysaa inaad si dhakhso ah u karsatid suxuuntaada ugu wanaagsan iyada oo aan la diyaarin ka hor. Talooyin sahlan iyo qorshe qalajin ah oo qallalan ayaa caawin doona xitaa bilowga hoyga si loo bilaabo hanaankan iyada oo aan wax dhibaato ah. Cunnooyinka raashinka caafimaadka leh waxay sameeyaan jajabyo qoyan iyo marti sharaf ah oo daawaday filimka.